Apple TV ma ọ bụ ikuku play bụ otu n'ime paramount ọrụ nke Apple Inc nke na-ekwe nkwa na videos nakwa dị ka ndị ọzọ stof na-na egwuri ma ọ bụ streamed na kasị mma kwere omume n'ụzọ nakwa dị ka mkpebi na-nọ na-elu. E nwere ọtụtụ huu ụzọ nke na-egosi na QuickTime videos bụ kpọmkwem na-egwuri na na Apple TV ma ọ bụ airplay enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Airplay metụtara okwu nke na-achọgharị n'elu internet ga-enye a miri emi nghọta ka onye ọrụ emesi a ire ụtọ nnyefe. Apple TV nwere nnukwu subscriber isi na nke a nkuzi e dere Idebe na-ele ha mkpa ha na achọ na zuru.
Gịnị mere nuuru na-Apple TV?
Apple TV ruru ya ọgbọ anọ na mgbe ịgbasa onye ọrụ isi nke usoro ihe omume ka ya ụlọ ọrụ na-ara na kasị ukwuu n'ụzọ. Onye ọrụ kwesịrị na-agagharị na online forums nakwa dị ka portals mere na ihe ọmụma na-enweta banyere QuickTime mwekota na Apple TV na kwa ịmụta uru nke Apple TV dị ka ọ bụ usoro ihe omume anya na-ewere gụgharia na-esonụ larịị enweghị onyinyo nke obi abụọ.
Si ọhụrụ integrations ka kwukwara atụmatụ nke usoro ihe omume n'ụzọ na-suut ọrụ kasị na e nwere ọtụtụ puku ndị uru nke na-eji Apple TV na ikwu na QuickTime dị ka ọ ga-ewetara na arụmọrụ nke a na-enwe na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị ukwuu results na tupu kwajuru ndebanye aha na-etinye na kasị mma ojiji. N'agbanyeghị nke eziokwu ahụ bụ na Apple TV a na-eji site a nnọọ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ na onye ọrụ kwesịrị ịchọ na ya onwe ya n'ihi na mmemme ọrụ, nke na-anaghị mara a nkịtị ọrụ mere na ọ bụrụ na e nwere nsogbu na-eme n'ọdịnihu mgbe ahụ, ọ nwere ike -mesoo na ala na afọ ojuju dị ka e nwere ga-adịghị mkpa na ịkpọtụrụ na Apple nkwado ma ọ bụ ikenye ajụjụ ndị Apple mkparịta ụka.
Site na-eso onwe aka teminoloji ala nke nkà atụmatụ nke Apple TV ga-bụghị naanị na-enwe onye ọrụ na ya ma onye ọrụ ọkọkpọhi kasị ukwuu pụta na mmekọrita nsogbu mkpebi. Onye ọrụ kwesịrị ịgụ site ná mmalite ruo ọgwụgwụ nke mere na azịza na-abụghị nanị hụrụ na ajụjụ ndị na na mgbe gwa n'ozuzu apple forums ma software omume na a ga-ẹkenam ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kachanụ results niile ọnụ. Akụkụ ikpeazụ nke a nkuzi ga-ewebata akakabarede omume na dị na akara na chọrọ nke ọrụ na onye ọrụ na-ọkọkpọhi egwu results.
Olee otú enuba QuickTime video on Apple TV
Ka e kwuru tupu na e nwere ọtụtụ iri puku ndị Filiks na mmemme na internet ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi pụta na mmekọrita ajụjụ nke e gwa ma na ebe a na nkuzi kasị ukwuu usoro ga-bụghị naanị ịbụ atụle ma onye ọ bụla na ọ bụla nzọụkwụ ga-kwuru ga-esonyere site a screenshot ka nke mere na onye ọrụ ọkọkpọhi mmemme ihe ọmụma n'ihi na-enweghị atụ pụta site n'ime kacha nta na o kwere omume oge. Ọ ga-bụghị naanị ime ka usoro mfe ma ga-hụ na ndị na-abụghị tech ọrụ na-enwe ike itinye ya n'ọrụ na-enweghị atụ o kwere omume n'ụzọ. Na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị na-a ga-agbaso:
1. Onye ọrụ kwesịrị imeghe iTunes omume na-pịa nkiri na-egwuri n'ihu n'ihu na-ebute usoro:
2. Site ebe onye ọrụ mkpa amalite na gụgharia ọrụ na-ahọrọ dị ka Apple TV n'ihu n'ihu nke mere na ihe ga-esi bụ kpọmkwem ihe dị mkpa:
3. Onye ọrụ ugbu a kwesịrị iji họrọ Apple TV si menu nke a ka na-egosipụta otu ugboro òké na-dị n'elu playback video ma ọ bụ ihuenyo:
Olee otú iji tọghata vidiyo ndị ọzọ na-Apple TV dakọtara videos
Wondershare Video Ntụgharị bụ n'elu omume nke na-enye pụta na kacha afọ ojuju ka ọrụ. Na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime uru ndị nke usoro ihe omume:
Usoro ihe omume na-akwado 150+ formats na maka otu ihe ahụ ọ pụrụ ọ bụla usoro a onye ọrụ nwere ike na-eche nke.
Onye ọrụ nwere ike nweta ihe 4K na Ultra HD format video akakabarede nakwa ọhụrụ akara terminologies eji ngwá ọrụ a.
Ihe omume ahụ nwere ihe edezi ngwá ọrụ agbakwunyere nke nwere video edezi ọrụ na-nyere ka ọrụ.
Usoro ihe omume na-enye ohere ndị ọrụ ibudata, bee, akuku na dezie vidiyo ka ha na-amasị ma na-akwado ihe karịrị 1000 weebụsaịtị.
Usoro a ga-soro na-kọwara dị ka n'okpuru
1. 1. Onye ọrụ kwesịrị na-agagharị na URL ebe a na-amalite usoro na nbudata, wụnye na-agba ọsọ nke usoro ihe omume:
2. The Tinye faịlụ button dị ka ọ nwere ike hụrụ na ọnụ ọgụgụ n'elu a na-ahụ na-enwe na-agagharị na ọbá akwụkwọ na tinye videos:
3. The mmepụta format a na-ahụ na-ahọrọ nke mere na onye ọrụ na-akawanye kasị mma mmepụta na akara na ihe ndị a chọrọ huu kasị magburu onwe akakabarede Usoro:
4. The tọghatara button bụ mgbe ahụ na-enwe rụchaa usoro nke akakabarede nke nwekwara okokụre isi usoro kpam kpam:
Ebe ọ bụ na inception Apple TV egosiwo-eto ngwa ngwa. Na ikwu na isiokwu a na-amị mkpụrụ nkuzi anọghị na-internet na ọdịiche ga na-bridged na enyemaka nke a nkuzi. Ọ ga-enye ndị niile dị mkpa na ozi ka onye ọrụ mere na ha na pacified. Onye ọrụ ga-abụ n'ezie ọ dịghị mkpa ndị ọzọ nkuzi ozugbo ọ na-agụ. Apple TV nwere ike subscriber isi na otu na-aga n'ihi QuickTime dị ka mma. The mkpa nke hour bụ iji nweta a n'elu ikpo okwu na ga-agwọta niile mbipụta nke ọrụ na enyemaka nke cross ajụjụ. Apple nwere nnukwu ibu ọrụ ma ọ bụrụ na ha na-eche banyere ya kpọrọ ihe.
> Resource> QuickTime> Olee otú igwu egwu QuickTime Video on Apple TV